Stephan Lichtsteiner Oo Ka Tagaya Arsenal Xagaagan | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Stephan Lichtsteiner Oo Ka Tagaya Arsenal Xagaagan
Xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Arsenal ee Stephan Lichtsteiner ayaa xaqiijiyay in uu isaga tagayo kooxda Arsenal xagaagan.
Daafaca reer Switzerland ayaa hal xilli ciyaareed ku qaatay Emirates kadib markii uu sanad ka hor si xor ah uagaga soo biiray kooxda Juventus.
Xiddiga ayaa ku dhibaatooday in uu si joogto ah ugu ciyaaro Kooxda Arsenal isaga oo kaliya 10 kulan u saftay premier League kooxdiisa inkasta oo uu Hector Bellerin dhaawac ku maqnaa.
Lichtsteiner oo 35 jir ah ayaa qirtay in uu isaga tagi karo kooxda Arsenal si uu koox cusub ugu biiro mustaqbalka.
“Taageerayaasha Arsenal ee qaaliga ahwo, Waxa aan ku dhawnahay in aan cutub cusub oo muhiim ah ku darno taariikhda cajiibka ah ee kooxda, laakiin in dhawaano Nasiib xumo ma ahan mid inagu filan”ayuu Instagram-kiisa ku qoray.
“Tani way adagtahay in la aqbalo, aad ayaan u niyad jabsanahay, Waxa uu ahaa u jeedkeena in aan koobka 2-aad ee ugu fiican ku soo celino waliba Arsenal ku soo celino meesha ay u qalantay”.
“Waxa aan saaxiibada aan isku kooxda nahay, shaqaalaha tababarka iyo waliba dhamaan Taageerayaasha Gunners u rajaynayaa nasiib wacan, waan ku kalsoonahay in ay kooxdu u tartami doonto u jeedkeeda xilli ciyaareedka dambe”.
“Waan jeclaaday in aan ka qayb ahaa kooxdan waxa ay ahay khibrad ii cajiib ah waana ku faraxasanaa laakiin Nasiib xumo ma lahayn dhamaad farxad leh, Waad ku mahadsantihiin soo dhawaynta diiran iyo taageerayaashiina fiican”